‘रमजान’को उपलक्ष्यमा प्रदेश प्रमुखद्वारा शुभकामना
जनकपुरधाम, २ जेठ । ईस्लाम धर्माबलम्बीहरुको पवित्र पर्व रमजानको उपलक्ष्यमा प्रदेश नंं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले शुभकामना दिएका छन् ।
उनले बुधबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रदेश नं. २ का साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति एवम् समृद्धिको कामना गरेका छन् ।
‘साथै यस पर्वले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त हाम्रो समाजलाई एकताको सूत्रमा आवद्ध गरी धार्मिक सहिष्णुता तथा सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुर्याओस्’ भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।